केयो’निमा वी’र्य झा’र्दा मो’टाइन्छ ? हेर्नुहोस के यो’निमा वी’र्य झा’र्दा मो’टाइन्छ ? – AB Sansar
केयो’निमा वी’र्य झा’र्दा मो’टाइन्छ ? हेर्नुहोस के यो’निमा वी’र्य झा’र्दा मो’टाइन्छ ?
September 24, 2020 adminLeaveaComment on केयो’निमा वी’र्य झा’र्दा मो’टाइन्छ ? हेर्नुहोस के यो’निमा वी’र्य झा’र्दा मो’टाइन्छ ?
वी’र्य र शु’क्रकीट फरक कुरा हुन् । वी’र्यमै अ’ण्डकोषमा बनेका शु’क्रकीट पनि हुन्छन् । महिलाको डि’म्बसँग शु’क्रकीटको मिलन सन्तान उत्पत्तिका लागि आवश्यक हुन्छ । सन्तानको उत्पत्ति प्रमुख रूपमा पुरुषबाट निस्कने शु’क्रकीट र स्त्रीमा विकसित भएका डि’म्बको मिलनबाट हुन्छ । यौ’नसम्पर्कका बेला पुरुषको वी’र्य स्ल’खलन हुँदा वी’र्य यो’निको पछिल्तिरको भागमा राखिन्छ ।वी’र्यमा भएका करोडौं शुक्र’कीटमध्ये केही पा’ठेघरको मुख हुँदै पा’ठेघर र त्यसपछि डि’म्बवाहिनी नलीमा पुग्छन् । त्यहाँ परिपक्व भएको डि’म्ब (अ’ण्डा) सँग असंख्य शु’क्रकीटमध्ये एकको मात्र मिलन हुन्छ । यसरी मिलन हुने प्रक्रियालाई निषेचन (FERTILIZ’ATION) भनिन्छ । शु’क्रकीट र डि’म्बको मिलन भएको कोषलाई युग्मज (ZY’GOTE)भनिन्छ र त्यही युग्मज पछि विकसित भएर शिशु बन्छ ।
यदि वी’र्यको स्ख’लन यो’निको भित्री भागमा भएको छ भने जति नै धेरै मात्रामा वी’र्य बाहिर निस्किएजस्तो लागे पनि पा’ठेघरको मुखसम्म पर्याप्त शु’क्रकीट पुग्छन् । सामान्यत: यसरी वी’र्य बाहिर निस्कनु ग’र्भधारण नहुनुको कारण बन्दैन ।
एकपल्ट वी’र्यस्ख’लन हुँदा यस्तै ३ देखि ५ मिली (५ मिली भन्नाले १ चियाचम्चा जति) वी’र्य निस्कन्छ । मू’त्रथैलीको मुनितिर दुईतिर वी’र्य थैली हुन्छन्, यसैको रस नै वी’र्यको मुख्य अंश (४६ देखि ८० प्रतिशत) हो भने पौरुष ग्रन्थिको रस पनि पर्याप्त मात्रामा (१३ देखि ३३ प्रतिशत) हुन्छ । अ’ण्डकोष तथा इपिडिडाइमिस (अ’ण्डकोषसंगै जोडिएको एक भाग) बाट आउने रसको मात्रा यस्तै ५ प्रतिशत हुन्छ भने मू’त्रनलीका अन्य ग्रन्थिबाट आउने रसको मात्रा त्यसभन्दा पनि कम ।
रसायनिक दृष्टिले हेर्ने हो भने यसमा पानी, श्लेष्म तथा शु’क्रकीटको पोषण तथा वातावरण सुव्यवस्थित गर्न आवश्यक थुप्रै रसायन हुन्छन् । अ’ण्डकोषमा बनेका शु’क्रकीट पनि यही वी’र्य थैलीमा आएर बसेका हुन्छन् र वी’र्यस्ख’लन हुँदा रसका साथसाथै बाहिर निस्कन्छ । एक चियाचम्चा वी’र्यमा यस्तै ५ देखि ७ क्यालोरी हुन्छ । तुलनाका लागि एक चियाचम्चा घ्यूमा १ सय १२ क्यालोरी हुन्छ । त्यसैले निलिएको अवस्थामा पनि यो पोषणका दृष्टिले महत्वपूर्ण हुँदैन । फेरि यो कुरा यो’निमा वी’र्य स्ख’लन भएको स्थितिमा पाइने होइन । त्यसकारण वी’र्य यो’निबाट ननिस्किएको कारणले मोटाइदैन्
Breaking – रोकिएको कक्षा १२ को परिक्षा हुने मिति तोकियो !
सरकारले नखोल भन्दा भन्दै खोलिएका बिद्यालयका ४ जना शिक्षकलाइ कोरोना संक्रमण पुष्टि !